Kemgbe e hiwere ya na 1988, Hebei Liju Metal Processing Machinery Co., Ltd. anọwo na -elekwasị anya na R&D na imepụta ngwa ọrụ ọnụ ụzọ na windo.
Ka ọ dị ugbu a, ọ na-elekwasị anya na: ahịrị nrụpụta kpụrụ akpụ dị elu dị ka ngwa mgbakọ ọgbakọ ọkụ, ihe mgbochi mgbochi ụzọ ụzọ akụrụngwa, na windo ọkụ ọkụ zuru oke. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ dị elu dị elu nke mmepe ngwaahịa na imewe, imepụta na ntinye, nbipu na ọzụzụ, yana ebumnuche nke "imepụta nrụpụta ọgụgụ isi na imepụta uru dị ogologo oge" iji nye ngụkọta ọnụ ahịa bara uru maka ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ nwere ọgụgụ isi.
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke mba, a na-egosikwa ya dị ka obere ụlọ ọrụ teknụzụ dị obere na nke ọkara na mpaghara Hebei yana ụlọ ọrụ teknụzụ (ihe ọhụrụ) na Hengshui City. Companylọ ọrụ ahụ dị na Wuqiang Town Industrial Zone, Wuqiang County, Hengshui City, Hebei Province, na -ekpuchi mpaghara karịrị hekta 50 na mpaghara ụlọ nke ihe karịrị square mita 20,000. Iji hụ na asọmpi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na mmepe na -adigide, ụlọ ọrụ ahụ na -eji 3% nke ntụgharị ya kwa afọ dị ka ego nyocha na mmepe.
The ụlọ ọrụ nwere elu mmepụta technology, nyekwara a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu nhazi ngwá na tooling, na nwere ike oru ike. O nwere nnukwu teknụzụ nyocha na ebe mmepe yana ntọala ọzụzụ ndị ọrụ. Ọ zụọla otu ndị injinia dị elu nwere ọmarịcha atụmatụ na ahụmịhe bara uru yana ndị otu na-arụ ọrụ na ndị ọkachamara. Ike zuru oke nke R&D na imewe, nrụpụta nkenke, nnwale nnwale nke akụkụ, nnwale arụmọrụ nke igwe ahụ niile na sistemụ ọrụ ahịa mgbe emechara ya.
N'ime afọ iri sochirinụ, Hebei Liju ga -aga n'ihu na -akwado echiche azụmahịa nke "ịbara ndị ahịa uru na iru ndị ọrụ", dabere na mmepụta amamihe nke ọnụ ụzọ na windo.
Anyị ji obi anyị niile anabata ndị ọchụnta ego ụlọ na ndị mba ọzọ ka ha gaa leta ma duzie ma chọọ mmepe. Anyị ga -enye gị ngwaahịa na ọrụ kacha mma. Ka anyị jiri ezi obi na -arụkọ ọrụ, na -erubere ntụkwasị obi anyị isi, na -eburu ụzọ '' buru ụzọ bụrụ onye ahịa '' dị ka ụkpụrụ anyị, wee jikọta aka maka mmepe. Otu imekọ ihe ọnụ, enyi ebighi ebi!
Kpọtụrụ onye: Zhang Qiang 13903185337